Ungabelana njani ngeefoto kwiDropbox okanye kuGoogle Drayivu usebenzisa WhatsApp | IPhone iindaba
Ungabelana njani ngeefoto kwiDropbox okanye kuGoogle Drayivu usebenzisa iWhatsApp
Uhlaziyo olutsha lwe-WhatsApp lufikile kwaye nalo onke amarhe kunye nethemba ebesinalo kuzo zonke iindaba ezazishiye ngasemva (okanye hayi) shwaka. Nangona kunjalo, nangona zimbalwa, amanqaku amatsha aphucula amava omsebenzisi ngeWhatsApp kancinci, nangona kubonakala ngathi ukusebenza ngokubanzi kwesicelo kuye kwancitshiswa ngesizathu esithile esingaziyo. Namhlanje sikuzisa isifundo sendlela yokwabelana ngeefoto kwiDropbox okanye kwiGoogle Drayivu usebenzisa i-WhatsApp, Enye yezinto ezintsha ezifakwe nguWhatsApp kuluhlu lwazo lotshintsho lohlaziyo esilufumene izolo.
Injalo loo nto, abalingane be-WhatsApp bashiye oonobumba abancinci "bugfixes" ngasemva ukuba banike izimvo zabo kuluhlu lotshintsho oluhlaziyiweyo lokugqibela ukuya kuthi ga kwinqanaba lokungenisa amanqaku amatsha kwesona sicelo sithandwayo sokuthumela imiyalezo ngokukhawuleza. Siyakufundisa indlela yokwabelana ngeefoto kwiDropbox okanye kuGoogle Drayivu usebenzisa iWhatsApp:
Kuqala siza kuya kwindawo yokugcina ilifu esiyithandayo, kwimeko yethu siya kusebenzisa iDropbox, endiyithandayo. Siza kuya ke kwifoto esifuna ukwabelana ngayo kwaye siyivule.
Xa sele uvulekile, kwikona ephezulu ngasekunene sifumana i icon «Yabelana»Yaziswa nge-iOS 8 kwinkqubo yokusebenza, siyayicinezela.
Nje ukuba ucinezelwe, imenyu yokuma iya kuvula, Siza kugxila kwimenyu engezantsi ukufumana umsebenzi «uvulwe kwi ...», cofa ucinezele kwakhona.
Okokugqibela, ngaphakathi "Vula ngaphakathi ..." Enye into evulekileyo iya kuvulwa, ngeli xesha siza kukhetha i-WhatsApp njengeendlela zokwabelana. Ngokuqinisekileyo i-WhatsApp iyakusivulela, ke sikhetha umfowunelwa kwaye siqale ukwabelana ngayo ngokukhawuleza nangokumanyanisiweyo.
Kulula kakhulu ukuba wabelane ngeefoto ezisuka kuGoogle Drayivu kunye neDropbox kuWhatsApp, siyathemba ukuba esi sifundo sikuncede, ngaphandle kokuba yinto "elula" kubasebenzisi abaqhelekileyo be-iOS, mhlawumbi abanye baye bahlangabezana nobunzima okanye babengayazi entsha umsebenzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Ungabelana njani ngeefoto kwiDropbox okanye kuGoogle Drayivu usebenzisa iWhatsApp
I-Apple ikhupha i-iOS 9.3 beta 5 yabaphuhlisi nasesidlangalaleni. Ipensile yeApple iphinda isetyenziswe ukuhamba
Thelekisa: I-Samsung Galaxy S7 vs iPhone 6s